प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने : देवेन्द्र पौडेल
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने : देवेन्द्र पौडेल Posted on: 2012-06-26
कपिलवस्तु, १२ असार (ओएनएस) : प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले दलीय सहमति बिना प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने बताएका छन् ।
उनले सहमति नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनै नसक्ने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कपिलवस्तुमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा पौडेलले संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने दावी गरे । राष्ट्रलाई नै गम्भीर संकट पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । अन्तरिम संविधानमा पनि कुन विधिबाट नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने प्रस्ट नभएकाले तत्काल राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ । ब्राजिलबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको सल्लाहकार पौडेलले बताए । Comments
• निर्वाचनको मिति तोक्न हतारिएको छु : रेग्मी
• मछिन्द्रको सानदार सुरुवात
• एमाओवादी–मधेसी मोर्चा गठबन्धन संकटमा
• विश्वका कुन महिला कति शक्तिशाली ? (सूचीसहित)
• कसरी हुन्छ सहकारीको अनुगमन र नियमन ?
• खुलेको १० मिनेटमै फेरी बन्द (फोटोफिचर)
• पाँच कञ्चनजंघा आरोहीको मृत्यु
• एड्सको औषधी पत्ता लाग्यो !
• एमाओवादीमाथि टिप्पणी गर्नु मुर्ख हुनु जस्तै : ओली